Xildhibaan Dalxa oo helay abaalmarinta Mooshinkii Jawaari | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xildhibaan Dalxa oo helay abaalmarinta Mooshinkii Jawaari
Sida ay xogtu sheegayso Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa Xalay si rasmi ah loogu magacaabay xil uu waligiis heyn jiray balse muddo ka hor laga qaaday.
Dalxa ayaa loo magacaabay u qaabilsanaha Baarlamaanka Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta waxaana arrintiisa loo adeegsaday nashqad yaab leh.
Intii ay socotay ololihii meesha looga saarayey Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari ayaa xildhibaanadii arrintaa waday waxaa loo ballan qaaday ballanqaadyo kala duwan oo isugu jiray Xilal iyo lacago.
Prof. Dalxa wuxuu kamid ahaa XIldhibaanadii loo ballan qaaday in la siin doono xil gaar ahaan xilkii uu waligiis jeclaa isla markaasna uu ka sameyn jiray faa’ido badan oo ahaa u qaabilsan Baarlamaanka Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta.
Prof. Dalxa ayaa kamid ahaa xildhibaanadii sida weyn uga shaqeeyey in meesha laga saaro guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Prof. Jawaari, wuxuuna dagaalkaas waqtiga badan qaatay u galayey sidii uu u heli lahaa xilkaas.
Yaa horey u hayey Xilkaan ?
Xilka loo magacaabay Prof. Dalxa ayaa horey waxaa u hayey Saqar Ibrahim Abdalla oo deegaan ahaan kasoo jeedo Jubbaland.
Sidee u dhacday nashqadda?
Si Prof. Dalxa loo geeyo xilkaas, dowladda Soomaaliya ayaa adeegsatay nashqadda ah in Saqar xil ka qaadis lagu sameeyo isla markaasna waxaa loo magacaabay Wasiir kuxigeenka Wasaaradda shaqada iyo Arrimaha Bulshada oo uu horey u hayey Xil. Cabdicasiis Saalax Carmaan.
Maxaa laga fahmayaa arrintaan?
Arintaan ay isticmaashay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa in magacaabista iyo xil ka qaadista dowladda ay ku dhisan tahay nin jecleysi iyo dan siyaasadeed balse aysan aheyn raadinta danta Guud iyo horumarka dalka Soomaaliya.